Citra beta dị ugbu a iji ulateomie Nintendo 3DS | Gam akporosis
Citra dị ugbu a, nnukwu emulator ọhụrụ maka Nintendo 3DS
Emulators bụ ụzọ ọzọ magburu onwe ya iji bịaruo egwuregwu egwuregwu na-enweghị ike ịbịaru ekwentị anyị. Ugbu a anyị nwere nke ọhụrụ, Citra, na-enye gị ohere igwu egwu Nintendo 3DS egwuregwu.
Citra abụghị n'ezie emulator ọhụrụ, dịka ọ dịla na nyiwe ndị ọzọ dịka PC. Ma ọ bụ ugbu a mgbe anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ahụmịhe gị site na mkpanaka gam akporo anyị.
Ikwesiri ima na ha abanyela n'ime ndia afọ ndị gara aga na-enweghị akwụkwọ nke Citra na Android, mana ọ bụ ugbu a ka anyị mechara nwee otu ọrụ. Ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ahụ na-ewe koodu sitere na Dolphin maka gam akporo, Nintendo Switch YuZu emulator, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Maka ndị nwere nnukwu njedebe, ha ga-eme ya nwere ụfọdụ atụmatụ nke mere na egwuregwu na-aga dị ka were were ga-ekwe omume, dịka nchịkọta nke CPU dịbu, imepụta GPU asynchronized, na ọrụ ndị ọzọ.
E nwere ọbụna usoro ọzọ nke atụmatụ ndị na-eji nke smartphones dị ka Nweta igwefoto, igwe okwu na accelerometer, nke ahụ mekwara ka ahụmịhe ahụ sitere na mkpanaka anyị site na i emomi Nintendo 3DS. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ya n'ụzọ ka mma dị ka a ga-asị na ị nwere ngụgụ ahụ sitere na ekwentị ahụ dị elu.
Anyị na-ekwu na njedebe dị elu n'ihi Citra naanị na-arụ ọrụ na mobiles na ibe 64-bit na ndị nwere gam akporo 8.0 ma ọ bụ karịa. Nwere ike ịghọta ihe kpatara egwuregwu Nintendo 3DS abụghị egwuregwu ọ bụla na enwere akụkọ ifo. Cheta na nbudata Citra beta anaghị agụnye nbudata egwuregwu, mana emulator n'onwe ya.
Akwa ozi Citra nwere egwuregwu egwuregwu maka Nintendo 3DS na igwe 64-bit anyị dị elu. Echefula nhọpụta iji weghachite egwuregwu ndị ahụ sitere na Nintendo console. Mba na-atụ uche usoro isiokwu a nke emulators si Nintendo.
Developer: Emere Emere
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Citra dị ugbu a, nnukwu emulator ọhụrụ maka Nintendo 3DS
realme na enye onyinye ya na smartwatches site na realme Watch
Subway Surfers abụrụla egwuregwu kachasị ebudatara n'akụkọ ihe mere eme, na-akacha Candy Crush